Shiinaha oo ku booriyey Mareykanka in ay ka laabato cunaqabateynta ka dhanka ah… – Hagaag.com
Shiinaha oo ku booriyey Mareykanka in ay ka laabato cunaqabateynta ka dhanka ah…
Posted on 21 Seteembar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Shiinaha ayaa ku booriyay dowlada Mareykanka in ay ka laabato cunaqabateynta ka dhanka ah ee la xiriirta diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo gantaalaha ay adeegsadaan ciidamada milatariga oo ay ka iibsatay dowlada Ruushka.
Digniin ka soo baxday Shiinaha ayaa loogu baaqay Mareykanka in uu ka laabto cunaqabateynta uu saaray milatariga Shiinaha hadii kale cawaaqib xumo ay ka dhalan doonto.
Maalintii shalay oo khamiista aheyd ayey aheyd markii waaxda arimaha dibeda Mareykanka ay shaacisay in diyaaradaha dagaalka ee SU-35 iyo gantaalaha difaaca ee S-400 oo shiinaha ka iibsaday Ruushka ay jabineyso cunaqabateynta uu Mareykanka uu horay u saaray Ruushka.
Mareykanka ayaa horay ugu eedeyay Ruushka in uu fara galin ku sameeyay doorashadii sanadii 2016-kii iyo madax banaanida dalka Ukraine.
Balse jimcadan maanta ayaa Shiinaha waxaa uu ka digay arintaan,isaga oo ugu baaqay hadii Mareykanka uu ka laaban waayo cunaqabateynta uu saaray ay cawaaqib xumo ka dhalan doonto.
Shiinaha ayaa tilmaamay in uu ka dhiidhin doono dhaqamada xun ee Mareykanka waxaana uu sheegay in ay tahay arin aan la aqbali karin sida uu sheegay afhayeenka wasaarada arimaha dibeda Shiinaha Geng Shuang oo maanta shir Jaraa’id qabtay.